आफ्नो ज्या*न फा*लेर अरुको ज्यान ब*चाउने हिरो - Complete Nepali News Portal
आफ्नो ज्या*न फा*लेर अरुको ज्यान ब*चाउने हिरो
ScotNepal February 11, 2020
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ पार्वति टोल स्थित भुपु ग्यारेज पछाडी सेति खोँचमा फसेका एक युवाको नेपाल प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ ।
एक साता देखी खोँचमा कुकुर फसेको र सोही कुकुरको उद्धारका लागि पुगेका २३ वर्षीय आकाश गुरुङ चिप्लिएर खोँचमा फस्न पुगेका उद्धार टोलीको नेतृत्व गरिरहेका शसस्त्र प्रहरी गण गण्डकी प्रदेशका प्रहरी हवल्दार श्यामकान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । पार्वति टोल स्थित भुपु ग्यारेजमा काम गर्ने गुरुङले सोमबार विहान ७ बजे कुकुरलाई उद्धार गर्ने भनि आफु खोँच तर्फ झर्दै गर्दा चिप्लिएको बताएका छन् ।
प्रहरी हवल्दार श्रीवास्तवका अनुसार उनि सेति खोलाबाट करिब ५० मिटर माथि खोँचमा अड्किएको अवस्थामा फेला परेका थिए । तत्काल प्राप्त सुचनाको आधारमा उनलाई सकुशल उद्धार गर्न सकिएको श्रीवास्तवले बताउनुभयो । श्रीवास्तव नेतृत्वको टोली उद्धारका लागि जादै गर्दा गुरुङ् निकै आत्तिएको अवस्थामा थिए ।
हाम्रा टिभि रिपोर्टरसंगको कुराकानीमा प्रहरी हवल्दार श्रीवास्तवले उद्धारका लागि अझैपनि प्रर्याप्त उद्धार सामाग्रीहरुको आवाश्यकता परिपुर्ति भईनसेकेको बताउनुभयो । आफुहरु कल्पना समेत गर्न नसकिने सेतिका कयौन अप्ठ्यारा खोँचहरुमा उद्धारका लागि जानु पर्ने भएकाले त्यसका लागि सुरक्षित उद्धार सामाग्रीहरुको आवाश्यकता रहेको श्रीवास्तवको भनाई छ ।
पोखरा र आसपासका खोँचहरुमा पटक पटक यस्ता प्रकार घट्नाहरु हुने गरेका छन् । विभिन्न कारण जिवनरक्षा चुनौतिपुर्ण बन्दै गैरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आजको राशिफलअसोज ८ गते बिहिबार :
बल्ल आयो अस्पतालको भित्री रहस्य, राति
हाम्रो डर कोभिड संग हैन, हाम्रै
‘घरमा उपद्रो गर्न छिर्दा सम्झाउदा आफैं
नयाँ नक्सासहितको पुस्तक वितरण नगर्न सरकारले
प्रेम गरिन्छ कि हुन्छ? – “हुन्छ”
पाथिभारा माताले सबैको रक्षा गरुन !
बल्ल आयो अस्पतालको भित्री रहस्य, राति १२ बजेनै यस्तो भएको...